Waxbarasho: Maxaan ka baran karnaa Nidaamka iskoollada Xisaabta ee Shanghai
By ibrahim Aden shire December 01, 2017
Sanadahaan danbe qaar badan oo ka mid ah dowladaha reer Galbeedka oo uu Ingirrisku ku jiro ayaa safar u galay inay wax kasoo fahmaan nidaamka waxbarashada Shiinaha. Nidaamka sida goonida ah indhaha caalamka usoo jiitay waa habka ay isticmaalaan iskoollada loo yaqaan “Shangahai Math Schools” ama iskoolada xisaabta ee Shangahaay.
Ardayda ka timaado magaaladaan oo ku taal Shiinaha ayaa wacdaro ka dhigo imtixaanka loo yaqaan PISA oo ah tartan caruurta kasoo jeeddo waddamada horay u maray/maraya ay ku galaan maaddooyin dhowr ah oo ay ku jiraan xisaabta iyo akhriska. (Shiinahu waddan ahaan oogama qayb galo tartankaan ee magaalo magaalo ayuu u galaa oo dhowr magaalo sida bajin, Shangaay iyo Honkook ayaa ka qayb galo iyagoo kala socdo).
Waxyaabaha iskoolladaan looga sii yaabay ayaa ahaa in ay ku dadaalaan in caruurta saboolka ah aysan ka hoosayn kuwa qaniga ah, taasina waa ku guulaysteen. Is-barbar-dhig lagu sameeyay Shangahaay iyo Iglan ayaa lagu ogaaday in caruurta ay dhaleen waalidiinta xamaalatada ah ee Shangahaay ay aqoon sarreeyaan kuwa ay dhaleen waalidiinta dabaqadda dhexe ah ee Iglan.
Sanadki 2015ki dalka Ingiriiska ayaa heshiish ku saabsan macallimiin isdhaafsi la galay Shangahaay. Ujeedka heshiishkaan ayaa ahaa in Ingiriisku ka barto nidaamka ay isticmaalaan. Tallaabadaan ayaa na tusayso inaysan ceeb ahayn inaad qofku wuxuu kugu dhaamo aad ka barato. Ingriisku kama xishoon inuu kaalmo aqooneed waydiisto waddan uu ilaa mardhow guumaysan jiray.
Sidaa darteed waxaan isku dayi inaan idinla wadaago sababaha keenay guulahaas. Ujeedka qoramadu waa xog gudbin iyo cashar barasho. Inkastoo aysan suura gal noo ahayn inaan si toos ah u dabaqno nidaamkaas, hadana waxaa laga yaabaa inaan wax un ka faaiidno.
Sirta koowaad ee iskooladaan ayaa ah inay dhigaan macalimiin tababar sare leh. Macalimiinta iskooladaan dhigo mid walba waxaa uu taqasus gooni ah ku leeyahay hal maaddo iyada unbuuna dhigaa. Inta uusan si buuxdo u shaqo billaabin ka hor waxaa uu soo maraa, macalin walba. shan sano oo tababar ah oo si gooni ahna loogu tababarayo inuu wax baro jaal cayiman. Tusaale, fasalka kowaad ama labaad. Inta uu tababarkaan ku jiro waxaa uu si qoto dheer u bartaa maaddada uu dhigi doono iyo sida ugu fudud ee caruurta uu dhigi doono wax u bartaan. Sidaas ayuu macalin buuxo ku noqdaa asagoo aqoon fiican u leh waxa uu dhigayo iyo cidda uu u dhigayo.
Sirta labaad ayaa ah manhaj jaan go’an oo la isu miisamay. Manhajka ayaa waxaa ka mid ah in iskoollada Shangahaay la dhigto saacado badan. Caruurtu waxa ay fasallada galaan 7da usbaxnimo waxaa ayna kasoo baxaan 4ta ama 5ta galabnimo (waxay ku xirantahay iskoollada hadba kay qaadanayaan). Fasalkiiba ardo tiro badan-marki loo eego tirade la ogalyahay inay fadhiistaan fasallada waddamada Galbeedka-ayaa fadhiisato, casharraduna waa kuwa gaagaaban. 35 daqiiqo oo uu macalinku leeyahay iyo 15 daqiiqo oo ah cayaar uusan macalinku go’aanmin.
Haddaan garab dhigno kuweenna waqtiga fasalka waa isku mid oo kiiba waa 45 daqiiqo laakiin kuweennu 45ta daqiiqaba macalinka ayaa leh oo caruurta lama siiyo waqti ay iskood wax u sameeyaan si xor ahna mid walba u cayaaro.
Xisaabta caruurta laguma qulaamiyo ee sidii tahaliishi ayaa loo siyaa. Marki la xaqiijiyo inay middaas barteen ayaa mid kale loo gudbaa. Tusaale, caruurta lama baro jajabka ilaa ay kasoo gaaraan fasalka afraad. Inta ka horrayso waxaa la hubiyaa inay meel saareen xisaab-fallada. Sidaasi waxaa ka duwan wadan Ingriiska oo caruurta aan loo eegin waxaan ma barteen balse cabbirka laga qaato sanadka uu jiro ilmuhu. Inta badan waddamada reer Galbeedku caruurtu ma dhacaan ee horay unbaa loo socdaa.
Guulaha ay Shangahaay gaarto waxaa qayb weyn ka qaato waalidiinta caruurta dhaaly oo waqti iyo lacag dheeraad ahba ku bixiyo wax baridda warasadooda. 80% waalidiintu waxay caruurta u qabtaan macalimiin caawiso iskoolka ka dib. Waxaan soo xusnay in subixii fasalka ay galaan ay kasoo baxaan gabbal-dhici ee goormaa wax kale la sii baraa? Ma aqaan. Laga yaabo in marki ay guriga yimaadaanba mid kale horay kasii billaabaan. Laga yaabo inay casharada qaataan labada cisho ee iskoolka fasaxa laga yahay. Kii ay tahay waxay na tusaysaa in horumarka Shiinuhu waqtiga yar ku gaaray ee dunidu la ashqaraartay uusan ku imaan tamashlayn iyo taagtaagsi.
Dalkeennu wuxuu ku jiraa marxalad kala guur. Waxaan soo marnay dib u dhac ba’an haddana waxaa muuqanayso rajo wanaagsan. Inaan kasoo kabanno dhibkii hore, mid soo socdana aan ka gaashaamanno waxay u baahantahay inaan ubedkeenna wax barno. Marxaladda hadda lagu jiro noo saamixi mayso inaan helno macalimiin tayadaan oo kale leh laakiin waxaan awoodnaa inaan xisaabta ku darsanno inaysan na anfacayn qaabka aan hadda macalimiinta ku dooranno. Sidoo kale, waxaan awoodnaa inaan tababar awoodeenna u dhigmo aan siinno macalimiinteenna.
Waxaan sidoo kale, ka baran karaan kaalinta waalindiinta oo runtii ah midda ugu muhiimsan ee Shangahaay meel gaarsiisay. Haddii ay waaliddiinteennu si dhab ah ugu soo jeestaan inay caruurtooda wax baraan, hubaashi isbadal weyn ayaa dhici. Ugu danbayn waxaan leeyahay yaannan noqon “bartiis yaqaan bar uma kororto” ee aan adduunka kale wax ka baranno.